« Rendez-vous 2016 » : mampanantena seho raitra i Lôla | NewsMada
« Rendez-vous 2016 » : mampanantena seho raitra i Lôla
Indray isan-taona ihany i Lôla no manao fampisehoana feno eto andRenivohitra. Fandraisana anjara miaraka amina mpanakanto hafa kosa ny ankoatra izay.
Araka izany, fotoana ifanomezany amin’ireo mpankafy azy hatramin’izay io, ka izay no naha « Rendez-vous 2016 » ny seho goavana izay hotontosaina ny alahady 1 mey izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany etsy Antsahamanitra.
« Nosafidina manokana Antsahamanitra satria io no toerana fanaovana fampisehoana ankalamanjana, ifanakaikezan’ny mpanakanto sy ny mpankafy indrindra. Azo hanaovana ilay tena fampisehoana feno ho an’ny maso sy ny sofina, ary mety tsara amin’ny kalitaon’ny feo ao », hoy ny nambaran’i Lôla, izay mampanantena seho raitra kokoa noho ny efa vitany hatramin’izay, amin’ity fotoana ifanomezana manaraka ity.
« Zava-dehibe ny fotoana ifanomezana, satria holalovana an-kira avokoa ireo vanim-potoana rehetra nampifamatotra ny mpanakanto sy ny mpankafy azy hatramin’izay », hoy kosa ny nambaran’ny mpikarakara, avy ao amin’ny Mada Pro. Haharitra ora telo, farafahakeliny, mantsy ny seho ka ampy tsara hiverenana any amin’ireo hira nanombohan’i Lôla nisedra ny sehatra, toy ny « Fa tena tia », « Lazao », « Miangavy », « Alay lakana », sns izany. Handalo ireo mihetsika sy nanana ny lazany, toy ny « K’Hatao an’izany”, “Malemilemy”, “Azafady”, “Sûr foana”, ka hatratry amin’ireo faramparany toy ny “Tsisy frein », « Tsisy hapoaka », « Mila anao », sns.
Fantatra ihany fa hisy ny mpanakanto naman’i Lôla hasainy manokana hifampziara talenta aminy amin’io fotoana io.